Nkọwa:Ihe niile n'otu igwe ọkụ LED Street,COB LED Street Light,100 Watt Anyanwụ LED Street Light
Home > Ngwaahịa > Uhie okporo ụzọ ọkụ > Egwuregwu okporo ígwè Sword na-acha ọkụ ọkụ > 100 watt Philips Integrated IP65 LED Street Lighting
Ihe Nlereanya.: AD-LD-20W2
Nkwakọ ngwaahịa: 50 * 41 * 40cm / CTN 15pcs / CTN 18KG / CTN
Mma agha Diana Street Light bụ ụdị omenala Diana Street Light . 20W Black LED Street Street na-eji Bridgelux COB. Mana Lumen nwere ike ibu 110lm / w. Site na Ọkwọ ụgbọala TUV Kwadoro nwere ike ime ka ọ dịkwuo ala. Ejiji omenala na-eme ka ala dị ala karịa ìhè ndị ọzọ n'okporo ámá. Ma àgwà bụkwa nke kacha mma. Ị nwere ike iji ya na mba ọ bụla, Ebe ọ bụ na voltage Input bụ n'etiti AC85-305V.
1, Okporo Ụzọ Okirikiri Ala
4, Ebe obibi bi
Ngwaahịa : Uhie okporo ụzọ ọkụ > Egwuregwu okporo ígwè Sword na-acha ọkụ ọkụ
Ike Dị Ike 120W Light Street Light Kpọtụrụ ugbu a
10Hv Nchedo Nleba 100W N'èzí okporo ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ike Dị Ike Bright 2700-6500k 75ra Light Street Light Kpọtụrụ ugbu a
IP65 Bridgelux 150w COB LED Street Light for Highway Kpọtụrụ ugbu a
Modular 150W COB LED Street Light Housing Kpọtụrụ ugbu a
60w Sword LED Street Light for Highway / Road / Parking Lot Kpọtụrụ ugbu a
100W Light Light Light Street Light Kpọtụrụ ugbu a
Ihe niile n'otu igwe ọkụ LED Street COB LED Street Light 100 Watt Anyanwụ LED Street Light Ihe niile dị n'otu ọkụ ọkụ Igwe ọkụ Light Street Ihe niile dị n'otu ìhè ụzọ anyanwụ Ihe niile dị na Light Light Street Ndị na-ere ọkụ Led Street